Maxkamad la soo taagay Gabadh Oo Lagu Eedeeyay Inay Dhirbaaxday Askari Yuhuud ah. | Awdalmedia.com
Maxkamad Milatari oo albaabada loo xirtey ayaa la soo taagay maanta gabadha caanka noqotay ee Ahed Tamimi iyo hooyadeed.
Ahed Tamimi oo 17 sano jir ah ayaa loo haystaa illaa 12 dambi oo ay ka mid yihiin weerar ay ku qaaday askar iyo kicin rabshado. Haddii lagu helo dambiyada lagu soo oogay ayay xabsi dheer lagu xukumi karaa gabadhan.
Shacabka reer Falastiin ayaa waxa ay u tahay Ms Tamimi astaan dhaqdhaqaaqa loogaga soo horjeedo Israel halka dad badan oo Israel ah ay u tahay gabar rabsho badan oo raadineysa in ay caan noqoto.
Ms Tamimi ayaa la keenay maxkamada Milatari saaka iyadoo gacmaha iyo lugahaba ka katiinadeysan. Bassem oo ah Tamimi aabaheed ayaa ku sugayay qolka maxkamada markii ay timidna waxa uu ku dhiirigeliyay inay is adkeyso.
Weriyaashii sugayay inay warbixino ka diyaariyaan maxkamadan ayaa lagu amray inay ka baxaan maxkamada. Qareenka difaacayay Axed Gaby Lasky ayaa sheegay in maxkamada ay sameysay wixii u wanaagsanaa oo aysan sameyn wixii u fiicnaa Axed Tamimi.
Wakaalada wararka AFP ayaa ka soo xigatay ms Lasky in ay ku dooday in aysan maxkamadu socon karin maadaama degenaanshaha Daanta Galbeed iyo maxkamadaba ay tahay sharci darro.
Ugu dambeyntii dhagaysiga maxkamada ayaa dib loo dhigey illaa iyo bisha March ee soo socota iyadoo ay tahay markii labaad oo dib loo dhigayo qaadista dacwada Ms Tamimi.
Ahed Tamimi ayaa markeedii ugu horeysay waxaa lagu arkay muuqaal video ah iyadoo la dagaalamaysa askari Yuhuudi ah.
Waxayna hore dhowr jeer uga qeybgashay banaanbaxyo loogaga soo horjeedo maamulka Israel. Madaxweynaha Turkiga Erdogan ayaa amaanay dhaqanka gabadhan waxana uu ugu deeqey Billad geesi.